China CY-1 (Ordinary outdoor push-pull clothes hanger) abakhiqizi nabaphakeli | UJialong
Ake usondele elangeni!
Ukuthungwa kwempahla Ingxubevange A00aluminium Ukuhlukaniswa komkhiqizo Izigxobo ezimbili / izingongolo ezintathu / izingongolo ezine
Isisindo sezinti ezimbili 0.45kg 0.56kg 0.84kg 1.12kg 1.4kg 1.0kg
(Ubukhulu beshubhu ngu-0.8 mm)
Imininingwane Yomlomo wepayipi
isici:Khulisa isikhala sefulethi, ukuze izingubo zakho zimunce ukukhanya kwelanga kusuka ezinhlangothini eziningi, njalo lapho uqoqa izingubo kugcwele ukukhanya kwelanga. Imodeli yokusetshenziswa ingaxazulula izinkinga zokushiswa yilanga, ukungatholi ilanga elanele nesikhathi esifushane sokuchayeka elangeni.
Indawo yokufaka:Izindonga zangaphandle zebalcony, kufaka phakathi ukwahlukanisa, amawindi aphikisana nokweba, izitini ezingenalutho, uvulandi we-arc, ukubiyela ngensimbi engagqwali, njll. Ngokuya ngezikhundla ezahlukahlukene zokufaka, indlela yokufaka ingalungiswa.
ukuthungwa kwezinto:Isigxobo sokumisa izingubo senziwe ngamandla aphezulu e-aluminium alloy. Ubuso bumbozwe ngokuphelele ngopende we-electrostatic, ongenambala futhi ongenakho ukugqwala. Idizayini eqinisiwe maphakathi yenza izingongolo zomiswe izingubo ziqine.Ngenxa yokuthi sinenqubo ekhethekile yokwelashwa komhlaba, ngeke ihlanganise futhi iphele eminyakeni emithathu kuya kwemihlanu. Nsuku zonke futhi kudingeka usebenzise indwangu ukusula ngaphambi kokumisa izingubo.
ukukhiqizwa:Inqubo ngayinye ilawulwa ngumuntu okhethekile, futhi ingxenye ngayinye yamukela indinganiso kazwelonke yokuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo ngezinga elikhulu kakhulu, ukuze amakhasimende azizwe ekhululekile.
ukupakisha:Sinebhokisi lemibala elikhethekile lokupakisha, ukuze sigweme ukulahleka okukhulu kunqubo yokuhamba. Vele, futhi samukela ukwenziwa ngokwezifiso kwephakheji yangaphandle. Uma unezidingo ezihlobene, ungathumela i-imeyili noma usithinte ngqo.
ezokuthutha:Sinenkampani ekhethekile yezokuthutha ezithunyelwa ngaphandle, yebo, uma kunesidingo, ungasebenzisa inkampani yezokuthutha oyikhethile.
isampula:Uma kunesidingo samakhasimende, singahlinzeka ngamasampuli athile enkomba nokukhethwa kwamakhasimende.
ukuhlolwa kwekhwalithi:Kunemibiko yokuhlolwa kwekhwalithi ehlobene nomkhiqizo, ukuze uqiniseke kakhulu ngemikhiqizo yethu.
Isixazululo:Kumakhasimende angeke afake noma abe nezinye izinkinga, ungathumela i-imeyili ebhokisini lethu leposi, noma usishayele ukubonisana, futhi sizohlinzeka ngezixazululo ngokushesha okukhulu.
Langaphambilini I-CY-2 (Isiphanyeko esivamile sangaphandle sokudonsa izingubo)